General C/weli Jaamac Xuseen (Gorod) oo ka Hadlay Weerarkii Hoyga Cabdi Qaybdiid – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General C/weli Jaamac Xuseen (Gorod), ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii lagu galay hoyga Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) oo ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya.
Taliyaha iyo masuuliyiin kale oo wehlineysay, ayaa tagey hoyga Senator Cabdi Xasan Cawaale oo ku yaala Degmada Hodan, ka dibna waxa ay u kuurgaleen sida ay wax u dhaceen.
Taliyaha oo la hadlay Warbaahinta, ayaa sheegay in uu gurigaasi u tagey, sidii uu wax uga ogaan lahaa ciddii ka masuulka ahayd weerarka lagu qaaday hoyga Mudanaha Aqalka Sare ka tirsan.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, ayaa xaqiijiyay in ciidankii guriga weeraray ay gaarsiiyeen dhibaato ballaaran, ha yeeshee ay ka xun yihiin waxa dhacay, isla-markaana ay cadaaladda la tiigsan doonaan kuwii ka masuulka ahaa.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay ciddii ciidanka soo amartay in ay ujeedo ka laheyd falkaasi, oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid aan xilligan la filleynin.
General Gorod oo ku celiyay inay ka xun yihiin arrinta dhacday, ayaa dhanka kale ku hanjabay inay ka daba taggi doonaan kuwii ka masuulka ahaa, gacantana ay ku soo dhigi doonaan.
Ciidanka weerarkan gaystay, ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya inay yihiin ciidan u daacad ah Dowladda Emirate-ka Carabta, oo ay ku tababartay Magaalada Muqdisho.
Thaabit Cabdi Maxamed ayaa waxa uu kormeer ku tagey hoyga Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid)